MyanmarNLP's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (1)Discussions (98)EventsGroups (3) MyanmarNLP's Likes MyanmarNLP's Friends
View All MyanmarNLP's Groups
Unicode ဆိုတာ revolution ပါ။ Optional choice မဟုတ်ပါ။
Started this discussion. Last reply by Saw Hla Aung Dec 2, 2009. ‘Myanmar Unicode မပြီးသေးဘူး’ ဟု သတင်းမှားယွင်းနေပါသည်။
Started this discussion. Last reply by Mark Dec 3, 2009. Myanmar3 ကို သင်ပိုင်သည်၊ သင်နှင့်ဆိုင်သည်။
Started this discussion. Last reply by Tun Jul 10, 2010. View All
MyanmarNLP has not received any gifts yet
jokar commented on MyanmarNLP's blog post Windows တွင် မြန်မာဘာသာ ပါဝင်လာရန် သင့်လက်မှတ် ရေးထိုးတောင်းဆိုပါ"ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုတွေပါ မြန်မြန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ"May 16, 2012Moe Thet commented on MyanmarNLP's blog post Windows တွင် မြန်မာဘာသာ ပါဝင်လာရန် သင့်လက်မှတ် ရေးထိုးတောင်းဆိုပါ"၀င်းဒိုး၈ မှာမြန်မာစာစနစ်ပါဝင်လာပါတယ် မြန်မာအိုင်တီပရို ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်..။"Nov 23, 2011MyanmarNLP replied to sandy's discussion iphone simulatorrမှာမြန်မာဖောင့် ပေါ်ချင်ပါတယ်။သိရင်ပြောပြပေးပါ။"Try any of the Myanmar Unicode fonts.
You will be ok and better for future."Sep 3, 2010MyanmarNLP replied to Win Myanmar Systems's discussion Gmail, Google, Facebook, Blogspot, Firefox, Joomla, WordPress... တို့ကို မြန်မာ version ထုတ်မည်။ translater/ developer/ project manager အလိုရှိသည်။"how about "shote-sar", like "win-sar", "htwet-sar"
:)"Sep 3, 2010MyanmarNLP replied to Tun's discussion Myanmar3Open Source Project: moving forward"Wow.. Good news and happy to know about the progress.
Let's make every stakeholder from Myanmar IT industry involved in it.
Can we expect collaboration and cooperation this time from Ko Ye Myat Thu too?
I remember that he talked about…"Aug 20, 2010Tun replied to MyanmarNLP's discussion Myanmar3 ကို သင်ပိုင်သည်၊ သင်နှင့်ဆိုင်သည်။"any volunteers?
if not, I will, to approach and request them. but you guys let me know the contacts."Jul 10, 2010JimSamMee replied to MyanmarNLP's discussion Myanmar3 ကို သင်ပိုင်သည်၊ သင်နှင့်ဆိုင်သည်။">>လုပ်တတ်ရင်၊ လုပ်နိုင်ရင် ဝင်ပြင်သွားကြပါ။ ဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါ။ စစ်ကူလိုနေပါတယ်။<<
Myanmar3နဲ့ပတ်သက်ပြီးMITမှာseminar or discussion…"Jul 9, 2010MyanmarNLP replied to MyanmarNLP's discussion Myanmar3 ကို သင်ပိုင်သည်၊ သင်နှင့်ဆိုင်သည်။"absolutely, 1 of us should."Jul 9, 2010 More... RSS
Myanmar Computer Federation (MCF), Myanmar NLP, MCPA
Myanmar Infotech, Yangon, Myanmar
Posted on February 23, 2010 at 10:30am 64 Comments
Microsoft Corporation တွင် ‘လူဦးရေ ၅ သိန်းကျော်က အသုံးပြုသော ကမ္ဘာ့ ဘာသာစကား အားလုံးကို Microsoft Windows တွင် ထည့်သွင်းပေးရမည်’ ဆိုသည့် official policy ရှိပါသည်။ သို့သော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မြန်မာဘာသာမှာ မပါဝင်နိုင်သေးဘဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ရာ၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးမှ စုပေါင်း၍ မိုက်ခရိုဆော့ ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ စာဖြင့် ထိရောက်အောင် မြန်မာ (ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း) ဘာသာ အသုံးပြုသူများ အားလုံးကိုယ်စား တောင်းဆိုမည့် အစီအစဉ်… Continue AddaBlog Post
At 3:30pm on November 16, 2009, it beginner said… Hi MyanmarNLP,
နားလည်ပါတယ်။ကျနော့ ကိုတောင်းပန်စရာမရှိပါ။ အဝေးကဝင်ပွါးသူသာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံချစ်စိတ်နှင့်ပတ်သတ်ရွေ့ဘဝင်မကျသဖြင့်ပြောသည့်ကျနော့comment မွှာကြမ်းတမ်းရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ အတွင်းရေးများမသိသလို ဝင်ရောက်အကြံပေးဆွေးနွေးနိုင်သောကျွမ်းကျင်မှူလဲမရှိပါ။ ခင်ဗျားတို့အများကြီးလုပ်နေတာအားကျပါတယ်။ခင်ဗျားတို့စည်းလုံးရင်ပိုခရီးရောက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်။
လေးစားလျှက် At 9:28pm on November 15, 2009, Ravi Chhabra said… Ko Zaw Htut,
I truly understand. It's just that we wish to move on from the dead lock, and the only way to do that is to stop talking about it, and if we do talk about it to do so fromamild angle.
My brother once gave meavery strong word of wisdom. That when you are accused publicly of doing something you didn't, it is best ignored. His reason was that those who need to know it will know that it's not true, and those who don't know it need not know it. Perhaps thats not the best of situations. Another way to respond is to wait outawhile,awrite something back much later that tries to do damage control. And bro, petty comments do not deserve petty replies. Coz it will never end that way, especially when we are all good with our words.
I would like to mention on your page here for everyone to read that when I asked you about Licensing your fonts some years back you mentioned that I could just use it without worrying too much about it. And I am sure there are lots of people who know you better in that light. Hence you don't actually need to defend right away. Thanks for reaching out to us on MITP.
Ravi. At 12:56am on November 14, 2009, Lynn Htun said… Ko Zaw Htut,
I'm not going to be childish like you. You actions only goes to show how mature and professional you are. Hope you will grow up soon enough.
L. At 12:21am on November 14, 2009, Khin Latt said… ကိုဇော်ထွဋ် - သမိုင်း ဆိုတာ လုပ်ဆောင်ချက် ပေါ် မူတည်ပြီး အချိန်မရွေးပြောင်း တယ် ဆိုတာ သိမှာပါ။
ကိုယ့်သမိုင်း ကြောင်း ကို ရေးသူဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပါဘဲ။
လူတိုင်း သမိုင်း တစ်ခုထဲ နဲ့ ပုံသေ မဖြစ်နေပါဘူး။
ဒီတော့ ကျွန်မ တို့ အားလုံး ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို တွေ (အထူးသဖြင့် ဒီလို Online Community နေရာ တွေမှာ) ကို အမြဲ သတိထားရပါမယ်။
ကိုဇော်ထွဋ် လဲ သတိပြု စေလိုပါတယ်။ အမ တစ်ယောက် အနေနဲ့ သတိပေးတာပါ။
ကျွန်မ တို့ အားလုံး ဒီနေရာ လေးရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ တွေပါ။
ညီအစ်ကို မောင်နှမ ထုံးစံ ငြင်းခုံ နိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် မနစ်နာ အောင်နေဖို့ သာလိုပါတယ်။
ဒီမှာ အားလုံးဟာ အချင်းချင်း ကူညီဖေးမဖို့၊ ကိုယ့်ပြည် နဲ့ လူမျိုး တိုးတက်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ နဲ့ ကိုယ့်အချိန် လေးတွေ ပေးပြီး နေကြပါတယ်။
ဖြစ်ပြီးတာတွေ၊ ပြောပြီးတာတွေ အားလုံးသင်ပုန်း ခြေ လိုက် ကြရအောင်။
အဟောင်း အမှား တွေ ပြောနေရုံ နဲ့ ဘာမှ အကျိုးမရှိ၊ မတိုးတက်ပါဘူး။
အသစ်က ပြန်စ လိုက်ပါ။
အရင်ထက် ပိုလှ တဲ့ သမိုင်း ဖြစ်လာမှာပါ။
မမျိုး (1989-90 MCC)
စာကြွင်း - ကိုဇော်ထွဋ် ရေချိန်တော့ ကိုက်မနေပါဘူးနော်။ နောက်တာပါ။ :-) At 4:15pm on November 5, 2009, SAW YE THWAY said… Ko Zaw htut
I Think you will not remember me because of when we meet that time i 'm stillajunior staff in KMD. You are the one of respected and role model for me.
Regards, At 11:10pm on September 1, 2008, Ko Chit said… Ko Zaw Htut, Thanks for joining us. No comments yet!